Amanyathelo ali-10 kwiNkonzo yaBathengi abaLungileyo Martech Zone
NgoLwesibini, Agasti 6, 2013 NgoLwesibini, Agasti 6, 2013 Douglas Karr
Sibhale malunga ukukhula kwenkonzo yabathengi kwezentlalo Kwixesha elidlulileyo, kwaye siyaqhubeka nokutyhala abathengi bethu ukuya kwicala. Inkonzo yabathengi kwezentlalo lulindelo lwabathengi bakho kunye nethuba elihle leenzame zakho zokuthengisa. Yintoni ebhetele kunokunceda umthengi kwindawo ebonakalayo apho wonke umntu anokubona ukuba uyinkampani enkulu kangakanani?
Inani labantu ababandakanyeka kwiincoko ezikwi-Intanethi kunye neempawu zonyuka unyaka nonyaka. Phantse iipesenti ezingama-50 zabo bonke abasebenzisi beendaba zosasazo basebenzise inkonzo yabathengi kwezentlalo, kubandakanya phantse isinye kwisithathu sabo baneminyaka engaphezulu kwama-65. Ngelishwa, iziphumo ukuza kuthi ga ngoku zishiya lukhulu ekunqwenelweni. Kuphela yi-36% yabathengi abenza imibuzo ngenkonzo yabathengi ngokusebenzisa ingxelo yemidiya yoluntu ukuba imicimbi yabo isonjululwe ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
Le infographic evela Iimpawu zeemvakalelo, yimephu yendlela eneenkcukacha zayo nayiphi na inkampani ejonge ekuphumezeni okanye ekuphuculeni inkonzo yabathengi ekuhlaleni.
tags: Inkonzo eyenzelweuxhaso lwabathengiinkonzo yabathengi kwezentlaloinkxaso yoluntuinkxaso